Nahavonjy Zanaka “Loutres” Roa Ao Taiwan ny Mponina · Global Voices teny Malagasy
Nahavonjy Zanaka “Loutres” Roa Ao Taiwan ny Mponina
Voadika ny 12 Avrily 2014 10:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, polski, 日本語, English
Loutre Eoraziatika. Saripikan'ny mpisera Flickr David Cook. CC BY-NC 2.0
Voavonjin'ny mponina ao amin'ny nosin'i Kinmen ao Taiwan ny zanaka “loutres” roa, nilaozan-dreniny raha nisy asam-pananganana drafitrasa nandrava ny akaniny.
Raha mifototra amin'ny fampafantarana [zh] nomen'ny Valan-Javaboarim-Pirenena ao Kinmen, dia hita tamin'ny voalohany avrily 2014 ireo zanaka “loutres” Eoraziatika kely roa. Ilay “loutres” lehibe kokoa dia milanja 530 grama, ary ilay hafa kosa milanja 480 grama. Nanombana ny manampahaizana ao amin'ny Vala fa tokony ho roa herinandro eo ho eo ny taonan'ireto biby roa ireo.
Nafindra ho ao Taipei ireo “loutres” ireo ary hokarakarain'ny Zoo Taipei.
Ao amin'ny nosy lehiben'i Taiwan, lany tarangana ny “loutres” Eoraziatika tamin'ny 1986 [zh] noho ny fandotoana ny renirano.Ao amin'ny nosin'i Kinmen, anefa, mbola misy latsaky ny 100 ny karazan'ity biby ity miaina ao amin'ny Valan-Javaboarim-Pirenen'i Kinmen.
Naharay “loutres” 27 [zh] hitan'ny mponina ny Valan-Javaboarim-Pirenena ao Kinmen hatramin'ny 1992, saingy telo ihany sisa velona.
Liwei Zhong nitatitra ny toe-piainan'ny “loutres” ao amin'ny lahatsary Facebook:
Miasa mafy ny rehetra mba hiarovana ireo “loutres” tandindonin-doza ireo.
Angamba ratsy fomba fiasa isika teo aloha, saingy miangavy mahaiza mankasitraka ny asa mafy ataon'ny Valan-Javaboarim-Pirenena ao Kinmen. Nahare aho fa tsy nipi-maso mihitsy nandritra ny alina iray manontolo ny ekipa nikarakara ny “loutres”. Manantena izahay fa hanao ny tsara indrindra ihany koa ny ao amin'ny Zoo ao Taipei, izay hiandraikitra ny fikarakarana azy ireo.
Pikantsary avy amin'ny lahatsary Facebook an'i Liwei Zhong ahitana ireo zanaka “loutres” voavonjy.
Nanazava [zh] ny fomba hiarovana ireo “loutres” ao Kinmen ihany koa ny Valan-Javaboarim-Pirenena ao Kinmen:
Mihena sy mihakely dia mihakely ny rano ao amin'ny tontolo iainan'ny “loutres”. Miantso ny mponina sy ny departemanta misahana izay asam-pananganana eo amin'ny faritra ny lehiben'ny birao fitantanana ny Valan-Javaboarim-Pirenena ao Kinmen, Yung-Fa Lin, mba hanao ny fanaraha-maso mandritra ny fananganana zavatra iray.